Yakasarudzika hurukuro naRichard Stallman weLinuxAdictos | Linux Vakapindwa muropa
Richard Matthew Stallman (kana "rms") haidi nhanganyaya, chirongwa chinoshamisa kubva kune izvo zvirongwa zvakaita seGCC compiler, iyo GDB debugger uye kunyangwe mupepeti weEmacs abuda. Iye anozivikanwa zvakare nechinangwa chake cheGNU uye nekuve iye akatanga iyo pfungwa ye "copyleft". Asi kana Richard Stallman achizivikanwa nechimwe chinhu, ndechekuti ave iye muvambi wemahara software kufamba.
Mr. Stallman chimwezve chinongedzo mu cheni yehurukuro kuti isu takatanga mwedzi mishoma yapfuura uye kuti isu tichaenderera mberi neakanyanya kutaurwa mavara. Richard agadzira mutsa pakati pebasa rake, uye apindura mibvunzo yemibvunzo yedu, iyo iwe yaunogona kuverenga nekunakidzwa pazasi. Uye pachikumbiro chemubvunzurudzo, mimwe mibvunzo yakapatsanurwa kuti ipindurwe zvishoma nezvishoma.
Linux Vanopindwa muropa: Pane yedu blog isu takazivisa kuburitswa kweshanduro nyowani dzeGNU / Hurd. Ndezvipi zvakanaka zvaunoona muHurd kernel pamusoro peLinux?
Richard M. Stallman: Isu takaparura kuvandudzwa kweGNU Hurd kernel muna1990 kuitira kuti iyo yemahara GNU inoshanda system ive nekernel. Ini ndakaparura iyo GNU system muna 1983 kuti ikwanise kushandisa komputa yemahara, iyo inoda yemahara inoshanda sisitimu, yakaumbwa zvizere nezvirongwa zvepachena. (Zvinodawo zvirongwa zvemahara zvekushandisa, asi rinenge riri rimwe danho.) Asi masystem ese aive ehupfumi, ndiko kuti, vakatorera avo vaivashandisa rusununguko. Kuti tiite komputa murusununguko, taifanira kutiza kubva kwavari. Maona http://gnu.org/gnu/the-gnu-project.html.
Chero chero sisitimu yekushandisa inoda kernel sechinhu. Kune yemahara inoshanda sisitimu, waida yemahara kernel. Muna 1990, pakanga pasina. Linux, iyo kernel iyo Torvalds yaizokura, yakanga isati yatanga. Kuve (zvakanyanya kana zvishoma) iyo yakasara sisitimu, yaive nguva yekutanga kernel.
Nhasi, Linux kernel yemahara (kunze kwe "mabhinari emabhinari": zvirongwa zve firmware, zvisina kodhi yekodhi, yakavanzwa muLinux), uye inoshanda mushe, saka haidi kutsiviwa. Naizvozvo, isu hatichaise pamberi Vakakuvara. Tinobvisa ma "blobs" kuti tiwane yemahara vhezheni yeLinux, iyo yatinoti "Yemahara Linux" kunyangwe muChirungu, uye tinoshandisa iyo GNU system neFree Linux. Maona http://gnu.org/software/linux-libre.
Kupesana, kutsiva "mabhurumu" (aripo muLinux seTorvalds anoiburitsa) neemahara software chirongwa chakakosha kwazvo. Pasina blobs, zvimwe zvinongedzo hazvishande; kusazvipfeka chibairo chatinoita kurusununguko rwedu. Tinoda kuvaita kuti vashande vakasununguka; ipapo isu tinofanirwa kutsiva blobs nemahara software.
LxW: Bell Labs Plan 9 yakazviti ndiyo yakatsiva Unix, asi yakazotadza nekuti Unix yaive yakakwana.
RMS: Handizive kuti sei, asi ndinopokana netsananguro iyoyo.
LxW: Iwe unofunga chinhu chimwe chete icho chakaitika kuPlan 9 neGNU / Hurd chingaitika?
RMS: Kufananidza pakati pePlan 9 neiyo Hurd haina kunaka: yaive nezvinangwa zvakasiyana. Plan 9 yaiitirwa senge tekinoroji yepamusoro chinotsiva Unix.
Yakatadza, uye chinangwa hachina kuzadzikiswa. Isu takabata mimba yeHurd seyakatanga Unix-senge kernel yaive yemahara. Yakanga isiri kutsiva imwe, nekuti isu hatina imwe. Ichi chinangwa chakawanikwa, kwete neGNU Hurd asi neLinux. Iyo GNU system inoshandiswa, kunyangwe isiri neGNU Hurd asi neLinux. Saka isu takafambira mberi kurwisa proprietary software pane dzimwe nzvimbo dzehondo.
LxW: Ngatitaurei nezve "muvengi" ...
RMS: Yedu "muvengi" ndeyake software, software inorwisa rusununguko nenharaunda yevashandisi, seyakazara. Microsoft ndeimwe yevavengi. Nhasi, zvinoita kwandiri kuti Apple muvengi akashata werusununguko. Ini ndinokukoka iwe, vadikani vaverengi, kuti mutize kubva kune ese ari maviri, uye pakupedzisira kubva kune ese epamhepo zvirongwa.
LxW: Iwe unoziva kuti huzivi hwaMicrosoft hwachinja zvishoma nguva pfupi yadarika.
RMS: Ndiri kuona shanduko yaunoratidza, asi zvinoita sekunge ini handichinje zvakanyanya.
LxW: Yaburitsa mamwe mapurojekiti, yaburitsa .NET Core uye Visual STudio Code yeGNU / Linux
RMS: Zvimwe zvikamu zve .NET zvakasununguka, kwemakore mashoma. Asi Microsoft inoramba kuvimbisa kuti isazorwisa vashandisi veNET nemvumo yayo.
Saka kuzvishandisa kune imwe njodzi. Isu tinopa zano pamusoro pekugadzira software ne .NET. Kana zviri zveVisual Studio, icho chirongwa chepamutemo. Saka haisi mhinduro, asi muenzaniso wedambudziko. Mhinduro yacho ingave yekuitsiva ne software yemahara.
Kuti chirongwa ichi chehunyanzvi chinoto shanda paGNU / Linux hachiitenderi, mutsika. Haisiyo chikonzero chekutenda Microsoft. Maona
http://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.es.html. Dai isu taizokudziridza GNU zvakanyanya kuti tibudirire, tisina chinangwa chakadzama, ndinofunga taizopemberera kuwanikwa kwechirongwa chekudyidzana senge Visual Studio paGNU / Linux. Chokwadi, inogona kuwedzera kubudirira kwesystem.
Asi isu tine chinangwa chakadzama chakakosha kupfuura budiriro: yemahara komputa.
Chinangwa chedu ndechekusunungura vashandisi, izvo zvirongwa zvekumira zvinomira kuvabvisa rusununguko.
Kana mumwe munhu akashandisa Visual Studio paGNU / Linux, zviri nani kwazvo kupfuura kushandisa Visual Studio paWindows, nekuti Windows haichisiri kuendesa. Asi haisati yasvika kurusununguko, nekuti Visual Studio ichiri kuzviisa pasi. Iwe unofanirwa kugadzira chirongwa chemahara kutsiva Visual Studio.
LxW: Asi chinonyanya kushamisa ndechekuti nguva pfupi yadarika pane runyerekupe nezve nhaurirano yemukati yeku "vhura kodhi" yeWindows, iwe unofungei nezve iyi inogona yemahara Windows?
RMS: Ini ndinorwira yemahara software, ndiko kuti, yerusununguko uye nharaunda yevashandisi. "Vhura sosi" imwe pfungwa, yakafungidzirwa kuve yezvematongerwo enyika uye yemaitiro, yandisingabvumirani nayo. Maona
http://gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.es.html. Naizvozvo, ini handishandise mazwi "kuvhura" kana "kuvhara" kutaura nezve software. Padanho rinoshanda, kana chirongwa chiri "chakavhurika sosi," chinenge chiri chemahara nguva dzose; anosiyiwa mashoma. Saka kana vakaburitsa "yakavhurika sosi" Windows, inenge iri yemahara.
Kana Windows iri yemahara software rimwe zuva, ichave ine hunhu. Zvinyatso kujekesa, nzira yayo yekugovera ichave ine hunhu. Tinofanira kuona kana iine chero imwe nyaya yetsika, asi ini handingazvirambe nekuti zvinobva kuMicrosoft. Ini handina rusaruro pamusoro peMicrosoft, kana Apple, kana chero munhu. Ini ndinotonga mugadziri wega wega zvinoenderana nemaitiro avo ...
LxW: Iwe naLinus Torvalds makaramba C ++ maringe nemutauro wekuronga C. Unogona kutsanangura kuti sei?
RMS: Mune yangu kesi, imo nekuti C ++ yakaoma kwazvo, handifunge kuti inopa bhenefiti yakakosha kuomarara kwayo. Handizive zvakataurwa naTorvalds nezvazvo.
LxW: Kupa pasoftware yemahara hakugone kuitwa chete nehurongwa. Freeguras.com muenzaniso wakajeka. Unomuziva here? Nemhizha (kunyangwe zvaizotakuriswa kune dzimwe nzvimbo) ivo vari kukwanisa kupa 10% yemari inowanikwa kuFSF.
RMS: Ini handimuzive, asi nhau idzi dzinondifadza zvakanyanya.
LxW: Chii chaungati kune vanhu vanofunga chete nezvekupa mitsara yekodhi
RMS: Kune nzira dzakawanda dzekubatsira uye kutsigira yemahara software kufamba. Maona http://gnu.org/help.
Kana iwe uchiziva kuronga zvakanaka, ndapota tibatsire isu kuronga. Kana zvisiri, ndokumbirawo utibatsire neimwe nzira.
LxW: Wachinja nyika, uzivi hwako hwapfuura pasoftware, uchisvika pazvimedu, uye kunyange mapurojekiti asina chekuita nekomputa (mimhanzi, mabhuku, nezvimwewo). Iyo yakashandawo kuparadzira huzivi hwekuburitsa kodhi kune mamwe minda senge biology (yemahara mbeu, Inopenya Chirimwa, OpenWorm).
RMS: Kana vakati "vhura," vanogona kunge vasingafarire rusununguko uye vasiri kusimudzira huzivi hwedu.
Mune mamwe eminda iyi, rusununguko rwevashandisi harumutswe senhau yakakosha. Pane nyaya zhinji dzetsika muhupenyu; Ini handimanikidze kuumba zvese nenzira imwechete. Kana kusarongeka kwe software yekambani kusisina kuenzana kukuru mune chero munda, ndinokorokotedza munda iwoyo.
Asi ngatiregei kuzvikanganwa mumunda wecomputer science!
LxW: Isu tinoziva musiyano uripo pakati peyakavhurika sosi uye yemahara software, asi iwe ungade here kuona reGPL rezinesi mune ramangwana munzvimbo dzakadai semushonga, biology,…?
RMS: Copyleft, iyo iyo GNU General Public License iri muenzaniso, zviri pamutemo zvinoenderana nekodzero. Ipapo zvinongoshanda chete kumabasa anoenderana nekopiraiti. Copyright mutemo haishande kune zvinodhaka kana mbeu.
Vamwe, vakavhiringidzika nepfungwa isingaenderani ye "njere dzehungwaru", vanofungidzira kuti mutemo wechi patent wakafanana nemutemo wekodzero. Saka ivo vanofunga kuchinjisa yakanangana nekopiraiti mune patent yasara.
Muchokwadi, iyi mitemo miviri yakatosiyana, haina zvakafanana. (Nechikonzero ichi, izwi rekuti "njere dzehungwaru" rinofanira kurambwa, maona http://gnu.org/philosophy/not-ipr.es.html.
Haifanirwe kudzokororwa kunze kwekunge iri mumakotesheni. Izvo hazvigoneke kuchinjisa kuruboshwe kwe
munyori akananga kuzvibvumirano.
Ndinoziva mumwe munhu ari kutsvaga nzira kuti awane zvimwe zvakafanana kuruboshwe-bapiro mhedzisiro ane patent, asi iye anofanira kuzviita nezvibvumirano uye hazvisi zvakasikwa sekushandisa iyo GNU GPL.
LxW: Ndakaverenga kuti yakawanda yenguva iyo inoshandisa koni yemodhi uye kuti inongoshandisa giraidhi modhi pane dzimwe nguva painenge ichida iyo. Paunoita, ndeipi nzvimbo yedesktop yaunofarira?
RMS: Graphics mode iri yechipiri kwandiri, ini handidi kushandisa nguva kuyedza dzakasiyana sarudzo. Ini ndinoshandisa GNOME kunze kwekuvimbika nekuti inobva kuGNU, uye inondigutsa.
LxW: Kazhinji vabereki pavanobvunzwa kuti ndeupi mwana wavanoda vamwe, vanogara vachinyara kubva pamhinduro uye vopindura kuti vanovada vese zvakaenzana. Iwe une vana: Emacs, GCC, kana GDB. Ndeupi waunoda zvakanyanya?
RMS: Ava vatatu ndivo vangu vehunyanzvi "vanakomana", asi wangu akakosha "mwanakomana" kunyangwe nekuti iye haazi wehunyanzvi. Iyo ipfungwa yerusununguko mukomputa, iyo pfungwa yekuti vashandisi vanokodzera kushandisa kudzora zvirongwa zvavanoshandisa, uye kuti isu tinorwira kutonga uku.
LxW: Ndakaona matauriro aunoita kuti akanaka magwaro vanyori anodikanwa, kunyangwe kupfuura mapurogiramu. Iwe unofunga kuti vanhu vakazvitsaurira vanodikanwawo kuti vaite ongororo dzekuchengetedza?
RMS: Ehe saizvozvo.
LxW: Ini ndinotaura izvi nekuti malware uye zvakakomba kusagadzikana zvine chekuita neGNU / Linux masisitimu ari kuwanikwa munguva pfupi yapfuura.
RMS: Hapana chakakwana. Iwo mapurogiramu epfuma ane hunyanzvi hwekukanganisa, uye zvirongwa zvemahara futi. Asi ndiani anobvumidzwa kugadzirisa zvikanganiso zvakadaro?
Ne software yemahara, chero mushandisi anobvumidzwa kuzvigadzirisa. Iwe unogona kuzviita iwe pachako, kana iwe uchiziva maitiro ekuronga. Unogona kushandisa programmer kuti uite izvi. Iwe unogona kutora chikamu muboka, uine vashoma mapurogiramu, kuti uzvigadzirise kuti zvibatsire vese.
Asi nepropeti software, muridzi wayo chete ndiye anotenderwa kuita shanduko iyi, kana chero shanduko. Unogona kunyange nemaune kuunza bugs. Nesoftware yepamberi, mugadziri anoshandisa simba pamusoro pevashandisi, uye anowanzo shandisa simba rake kumanikidza mashandiro asina kunaka pavari asingagadziriswe nemushandisi. Maona http://gnu.org/proprietary/ yemakumi emimwe mienzaniso yeanokuvadza mashandiro muzvirongwa zvakajairika zvekudyara.
Zvinoitika kuti software yepamoyo inoita komputa yejeks. Nesoftware yemahara, hutsinye hunoshanda hahuwanzo nekuti vashandisi vane masimba ekupedzisira uye vanogona kuzvidzivirira kubva kune yakashata uye vanoodza moyo kuiswa kwayo.
LxW: Uyu mubvunzo wekupedzisira chimwe chinhu chakakosha. Ini ndinokusiira mamwe mazita uye iwe unoisa kapfupi maonero pane rimwe nerimwe:
Inosanganisira zvikamu zvekuchengetedza; imwe iGoogle Play, iri malware. Maona http://gnu.org/proprietary/proprietary-back-doors.html.
Iyo yemahara vhezheni ye Android iri Replicant; maona replicant.us.
Nezve nyaya ye Android nerusununguko, ona http://gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html.
Inoshandisa madhiraivha eimba, asi inogona kunge iine software shoma pane yeApple.
Iyo ine yekukanganisa inouraya: haitombozive maitiro ekutanga pasina proprietary software. Maona fsf.org/resource/hw/single-board-computers yekuenzanisa nezvimwe zvigadzirwa.
Kubva pane zvandakanzwa, zvakasununguka uye zvine hunhu. Ini handina ruzivo rwakananga nazvo, nekuti ini handiite mapurojekiti akadaro.
Izvo hazvirwire rusununguko rwemushandisi.
Iine software yekuchengetedza, "blobs" mune kernel, yakafanana ne "blobs" mune yakajairwa vhezheni yeLinux.
Inotanga neGNU / Linux uye inowedzera software yekudyara yekuparadzira mitambo yekutengesa. Ini ndaisazoshandisa nekuti ini handidi kusiya rusununguko rwangu. Maona http://gnu.org/philosophy/nonfree-games.html.
Chaizvoizvo muvengi werusununguko rwedu, kunyange hazvo ichigadzira zvimwe zvirongwa zvemahara.
Mune dzimwe nyika, chombo chekuuraya.
Munyika medu, njodzi kuvanzika.
Usapotsa hurukuro dzinotevera… Uye usakanganwa kusiya zvaunotaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Richard Stallman: Yakasarudzika Bvunzurudzo yeLxA
Gaston Ramirez akadaro
Inonakidza kwazvo hurukuro, nyasha LxA
Pindura Gastón Ramirez
ichi chirahwe chinopesana nemaitiro ake, pakati perusununguko kuita izvo UNODA NEZVO ZVINHU, ndiri kuenda here kuti nditaure zvinotaurwa neanux fanboys? Izvo zvakaita sebhizinesi, kana iwe uchida vatengi iwe unofanirwa kuchinjika, asi kuti unyangarike, ini handinzwisise kuti nei kuwanda kwakanyanya nezvinhu izvi uye kana paine zvichemo zvakawanda, ipapo kugadzira dzimwe nzira, kwatova nedzimwe nzira dzekupenya (chete haina kunyatso shanda, mukutsinhana haina kudya mhuka yavanodya) uye kwete kuvhiringidza monopolies nebhizinesi. Zvakanaka uyu mr. Bhiza revaJudha reTrojan hazvishamise kuti rinoenda pane yemahara solftware roll kana risingadziviriri rusununguko asi mukana wekuteedzera uye kuzvitonga pasina kubhadhara kobiri. Firefox yatova humbowo hweizvi
Asi idofo ripi rauri kutaura iwe. Hapana mudziviriri weSoftware Yemahara ari kukuudza zvekuita, kushoropodza chete kunoitwa kweiyo proprietary software system uye yemahara propaganda kuitira kuti gare gare unosarudza ... inonyengera.
Gadzira dzimwe nzira? GNU ndiyo imwe nzira ... ndinodzokorora ... inonyengera.
duster rako rakaonekwa pawakati jew
dzokera kubako rako reNazi-nazi
Nhaurwa yakanaka, kunyangwe ndingadai ndaifarira RMS kubvunzwa nezveDebian neUbuntu.
Hurukuro yakanaka kwazvo
Yakakura mhando yehurukuro. Inotaridzika kunge inopindirana. Ndatenda nekuisa.
Roberto Mejia akadaro
Zvakanakisa, ungadai wakamubvunza kuti anoshandisa chii kubvira ndataura kuti Nzvimbo inowanzo shandisa XD
Pindura kuna roberto mejia
Lenin Pena akadaro
Kubvunzana kukuru. Ini pachangu, ndinopokana kuti Microsoft iri kutaura nezve kuburitsa windows senge yakavhurwa sosi, kunyanya kana iyi vhezheni itsva yamira kuve chigadzirwa kuti chive sevhisi.
Pindura Lenin Peña
Ini ndakabata naye mumunhu uye ari munhu akanaka pachokwadi. Pfungwa yakakomborerwa, izvo futi. Zvinogona kuita kunge zvinopenga mune dzimwe pfungwa, senge kernel blops, asi hei, izvo zvinoenderana neese ega kuti uzvishandise, haugone kutarisa kumutsara wega wega uye nepamusoro pekodhi nenzira isinganetsi.
Kune rimwe divi, kune vamwe vataure, kunze kweiyo inonyanya kuvenga vanovenga inzwi ravo randinganzwe ndichinongedzerwa kwariri, mushandisi (specialk) ati haadzivirire rusununguko asi kuteedzera. Ngatione, ndezvekuti haisi kutevedzera zvakavanzika zveyakodhi yekodhi iyoyo, asi zvikamu zvekusimudzwa kweyakavhurika sosi chirongwa (yeruzhinji ruzivo rwezvivakwa) kuitira kuti chirongwa icho kana kodhi ikwanise kuchinjiswa kune chaicho zvinodikanwa zveumwe neumwe ., ndipo pane rusununguko. Semuenzaniso, mushandisi anoshandisa Debian nekodhi kodhi, asi ini handizvifarire nekuti hazviratidzike nemadriver kana zvirongwa zvandiri kuda, nekuti ini ndinoita yangu yega vhezheni nezvirongwa izvi, semuenzaniso, zvedzidzo.
Uye ipapo ini ndinoburitsa iyo vhezheni yeDebian nemapurogiramu edzidzo kuti iwe ugone kuita zvaunoda nayo. Iko hakuna zvakavanzika zvehungwaru nekuti ini ndinotanga kubva pahwaro hwandinopurinda kuti igone kushandiswa kana kuchinjwazve.
Meseji yemunhu uyu haisi yekuti proprietary kana yakavharwa software inorangwa, saka inosiya musuwo wakavhurika kune wese munhu kuti aite zvavanoda.
Meseji yemunhu uyu ndeyekuti kumwe kwekushandisa kwerusununguko kutora mukana wekopiriti ndeyekudzivirira kutengeserana kunoenderana nekugovana rusununguko rwakazara pane izvo zvinotengeswa, nekuti izvi zvakakosha kuve pachena kana kujekesa nezvakatengeswa.
Yemahara software haifanirwe kunge iri yemahara uye zvirizvo haina, nekuti zvese zvine mutengo, ichi chinhu chakakosha musikirwo (mitengo haifanirwe kunge iri chaiyo mari kana zvinhu: kune akawanda marudzi emitengo nekutengesa: senge nyasha: kana munhu asingadzore mabhenefiti zvishoma zvishoma anopererwa nezvavanoda), kunyange iri iri nyaya yehungwaru iyo dzimwe nguva yakaoma kunzwisisa uye haisiyo nyaya.
Yemahara software ndeye bhizimusi inoenderana nekugovana zvirikuitika izvo zvinoburitswa nemunhu; Izvo zvakashata ndezvekuti pachave nevaya vanobatsirika vasina kupa chero chinhu kudzosera, asi zvichiri kubatsira kana zvakanaka kuzviita nekuti pakupedzisira mumwe anogara achigamuchira zvinopfuura izvo zvaanopa, sezvo iro basa iro munhu raanopa rinoguma kubuda kubva izvo zvinowedzerwa zveVamwe uye pakupedzisira munhu wese anogamuchira zvinopfuura izvo zvavanobhadhara kana kuendesa, saka mutengo wevaya vasingape mari unofungidzirwa nekuti pakupedzisira kune purofiti kana hupfumi kana purofiti (dai zvisiri izvo, izvi bhizinesi modhi yaisazobudirira).
Inodaidzwa kuti yemahara sekudaidzwa kwaingaitwa A, zita rinoita ongororo inoitwa kusiyanisa kubva kune izvo zvinofungidzirwa kuva zvevaridzi, asi pfungwa inopesana inogamuchirwa: pachava nevaya vanoshevedza kutengeserana mahara "proprietary" uye proprietary trade "mahara "uye zvinopesana.
Mune izvo zvinonzi kutengeserana mahara, iwe unotengesa nechibvumirano chinosiya akateedzana mamiriro ezvinhu ayo avo vanokoshesa nekuti vanofunga kuti rusununguko irworwo rwekuteedzera nekuvandudza chigadzirwa pamutengo wekutengesa zvakare nemamiriro akafanana zviri nani pane kutengesa nemutengo. izvo zvinorega zvichikutendera kuteedzera kana kunatsiridza chigadzirwa, kana kuziva chizere chigadzirwa chakatengwa kana kutengeswa.
Pachave nevaya vanogovana kuti zvirinani kubhadhara usingazive zvese zvakatengwa (yakavharwa kana yakavharwa sosi) kana kuve nerusununguko rwekuteedzera kana kugadzirisa chigadzirwa mukutsinhana nekukwanisa kuzotengesa, (kana iwe ukasvika chibvumirano -kubhadharwa kutsva- pamwe nemidziyo yechigadzirwa yaakatengesa kuitira kuti ibudirire), mumamiriro akafanana ekuva sosi kana chirongwa chakavharwa uye kuti chigadzirwa chayo chakagadzirwa muchibvumirano nemuridzi hachiteedzerwe. kana kuvandudzwa pasina mvumo (imwe muripo) kutanga mukukura kwekutanga.
Uye sekutaura kwangu, tenda kuti zvakafanira kudana iyi bhizimusi yemahara pane imwe nekuti kumwe kutengeserana nenzira kwayo kunoda mutengo kana chibvumirano chebhizimusi, chinoenderera mberi nekutengesa pasi pemamiriro ezvinhu akavhurika sosi uye kubvumidza kutevedzera .uye uvandudze chigadzirwa kune vamwe pasina mumwe mutengo pane kukwanisa kushandisa kunatsiridzwa kwakaitwa kune chako chigadzirwa nekuda kwerudzi irworwo rwechibvumirano chebhizimusi.
Kana isu takasununguka, isu tinozorega mumwe nemumwe achisheedza kutengeserana kwavo chero chavanoda, asi nekuda kwekuita kwemutauro, mazita anopedzisira ave neyakajairika uye inogamuchirwa kugamuchirwa: ndosaka kunyangwe avo vanofunga kuti kuzvitengesa vega kwakasununguka kupfuura izvo zvinonzi kutengeserana mahara Vanogamuchira mashandisiro nemazita akatosimbiswa kureva kutengeserana kwega kwega, izvo zvaigona kunge zvakadaidzwa kunzi kutengeserana A nekutengesa B: yega yega neuzivi hwayo hwechibvumirano uko vatengesi vanotora mukana vakasununguka kana vachigamuchira kana vasingagamuchire mamiriro acho. kana mitengo yakapihwa kuzvitenga kana kwete.
Iyo inonzi yemahara software haina mahara, ine mutengo, painotengwa kana kutengwa, iyo bhizimusi inogamuchirwa pasi pemutengo kana mamiriro kuti chero kunatsiridzwa kune chigadzirwa chinowanikwa chinofanira kuramba chiine mamiriro akafanana ekutengeserana mairi inodikanwa kuvhura kodhi (yakavhurwa sosi) uye kubvumidza kuteedzera nekuvandudza chigadzirwa chakagadziridzwa: Uye iyi modhi yebhizinesi iripo nekuti inoshanda uye inobatsira, inopa purofiti (yerudzi rupi zvarwo, hapana mari chete inowana) kune avo vanoshandisa kuti itengese.
Izvo zvakafanana nesoftware yepfuma painotengeswa kana kuwanikwa, mamiriro ezvinhu anodikanwa nechibvumirano chebhizimusi anofanirwa kuchengetedzwa: usavhure kodhi uye uisiye yakavharwa usingazive maitirwo ayo uye kusatombokwanisa kumisa kuteedzera kana kugadzirisa chigadzirwa.
Rusununguko rwuri kurega munhu wese achitengesa izvo zvavanonzwa vakasununguka nazvo. Asi sezvazviri zvakasikwa uye zvakajairika mune democracy kana rusununguko rwekutaura, avo vanofarira kunonzi kusununguka kushambadzira (zvinogona kunzi B kana C kana Z) vachagadzira propaganda uye mushandirapamwe wekureruka kwavo kuitira kuti vanhu vazhinji vazvishandise, uye saka Ichadzivirira kunaka kwayo apo ichaburitsa zvikanganiso zveimwe bhizinesi: Ipapo uye kune wese anosarudza zvakasununguka kuti nderipi bhizinesi ravanoda.
Richard Stallman haarwisane nerusununguko rwekutaura, uye haarange avo vanoshandisa kana kushambadzira mune yavanoti yekambani yekutengesa, haazvifarire uye akataura maonero ake ekuti nei asingazvifarire uye nekuti anosarudza rumwe rudzi Zvekutengesa (izvo zvaakakurudzira kuti zvioneke) zvekuti kwaari rudzi urwu rwekutengesa rwunoita kunge rwakasununguka uye rwakakosha kudarika rwumwe: Uye naye kune vanhu vazhinji vanogovana pachena kukosha kwake uye vanodzivirira rudzi irworwo rwekutengesa nekurishandisa.
Kushandisa imwe mhando yekutengesa haina kukuvadza kushandisa imwe, chinhu chakajairika ndechekuti mhando mbiri dzekutengesa dzinoshandiswa imwe neimwe nemitengo yayo uye mamiriro echibvumirano, zvese zviri zvakaenzana pachokwadi: nekuti vaviri vacho vanotengesa imwe neimwe nemamiriro avo kana mitengo mukati avo marudzi emakondirakiti, vachisiya yega yega kuti igamuchire pachena kana kwete mamiriro echibvumirano kana chekushandisa. Kuti mumwe nemumwe, kubva parusununguko rwavo, anokoshesa mhando yechibvumirano chavanokoshesa zvakanyanya kutambira zvibvumirano zvavo kana mamiriro ekushandisa kana zvekutengeserana (izvo mune yemahara software, sezvakataurwa mubvunzurudzo, zvinoenderana nekodzero).
Pindura kune dosyogoro
Sekureva kwaRichard Stallman mune zvese kunze kwekuti drones chimbo chekuuraya uye njodzi kune zvakavanzika, zvakafanana nekutaura kuti mapanga ane njodzi kuhupenyu hwevanhu nekuti vamwe vanoashandisa kuuraya.
Yakanaka hurukuro, ndingadai ndakavada kuti vataure zvakawanda nezvemahara Hardware.